ပစ္စည်းတမျိုးတည်းနဲ့ သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Photo Finish Primer Waters! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ပစ္စည်းတမျိုးတည်းနဲ့ သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Photo Finish Primer Waters!
ပစ္စည်းတမျိုးတည်းနဲ့ သုံးမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုများအသုံးပြုရမလဲလို့ စိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်။ ဒီPrimer လေးကို Smashbox ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး Face Primer, Setting Spray နဲ့ လန်းဆန်းတဲ့အသားအရေလေးအဖြစ် အသွင်သုံးမျိုးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Limited Edition အနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပြီး သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့လေးကိုပါ ပေါင်းစပ်ဖော်ထုတ်တာကြောင့် မိတ်ကပ်သားကြာရှည်ခံရုံသာမက လန်းဆန်းတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာအသားအရေကို သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေပြီး အေးမြတဲ့ခံစားချက်လေးကိုတနေကုန်ခံစားရအောင် သခွားသီး၊ သဘာဝသစ်ဥသစ်ဖုတို့နဲ့ဖော်စပ်ထားပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကြာရှည်ခံစေရုံသာမဟုတ်ဘဲ အသားအရေအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုတဲ့ Product လေးပါ။ ဗူးပုံသဏ္ဍန်အရ ကမ်းခြေရောက်သွားတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုပေးပြီး Spray ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကြောင့် သုံးရအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ မျက်နှာအသားအရေအတွင်းအလျင်အမြန်စိမ့်ဝင်စေနိုင်တာကြောင့် ခြောက်အောင်စောင့်နေစရာလည်း မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒါတင်မကဘဲ ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပြီး နူးညံ့တဲ့အသားအရေလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေတိုင်းအသုံးပြုနိုင်အောင် စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ထားတာကြောင့် အသားအရေမရွေးယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Skin tone ကိုလည်းပြန်လည်ချိတ်ညှိပေးနိုင်တဲ့ Primer လေးပါ။ မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် Primer အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးနောက် Setting Spray အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ ၈လက်မ အကွာလောက်ကနေဖြန်းပြီးအသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၃၂ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီး 116ml ပါဝင်ပါတယ်။ အရေအသွေးကောင်းပြီး ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဒီ Product လေးကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင် အမြန်လှုပ်ရှားလိုက်မှဖြစ်မယ်နော်။
Image Source: www.smashbox.com
UV Rays တွေသာမက Digital Devies တွေကထွက်တဲ့ High Energy Visible ( HEV ) light တွေပါကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့..